Malunga nathi-Isixhobo se-TST (Fujian) Co, Ltd.
Isixhobo se-TST (Fujian) Co, Ltd.
Sungula ngoMatshi ka-2006, eyinkampani yamazwe aphesheya
ubungcali kumatshini wokuvavanya izixhobo zokusebenza kunye nezinto ezizenzekelayo.
Ngoyilo lwanamhlanje kunye netekhnoloji yophuhliso kunye nezixhobo eziphezulu zokuvelisa, siyazibandakanya kwimveliso nasekuphuhlisweni kwezixhobo ezahlukeneyo zokuvavanya ukusebenza okuphezulu kunye nezixhobo ezingekho mgangathweni.
Ukusukela oko yaqalwa, inkampani ibambelele kwindlela yokudibanisa imveliso, imfundo kunye nophando, kunye nolwazi lwethiyori kunye nokomelela kophando lwezesayensi lwamaziko amaninzi ophando kweli lizwe, ngesiseko sokumba kunye nokufumana itekhnoloji yemveliso ephezulu yamazwe, ubuchule obutsha, uguquko oluzimiseleyo, Zabalazela ukudala nokuphuhlisa iimveliso ezintsha ezinempawu zaseTshayina. Yenza igalelo ngenxa yokuphucula umgangatho wophando lwezenzululwazi kunye neemveliso e China.
" Inkangeleko yobuthathaka, Ubungcali ekuqeqeshweni" yintloko esizimisele kuyo, Isitayile sokuyila, ubuchwepheshe obuhle kakhulu bokuvelisa kunye nenkqubo egqibeleleyo yokunikezela ngemveliso yenqanaba lokuqala kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu kwiziko lophando lweNzululwazi, iidyunivesithi kunye neekholeji. kunye namaziko okuhlola umgangatho.
Ukugqitywa kwemveliso nganye kukuchukumisa okufudumeleyo kwetekhnoloji yoomatshini. Ukungena okuphezulu kwesakhono ngasinye sisiphelo sengqondo yoyilo. Isilingo esiphumeleleyo sezinto zonke ezinobuchwephesha obuphezulu kukuzama ukuvelisa izinto ezintsha kwaye unoyolo ukugqwesa. Ukungenisa ubugcisa baseJamani kunye nokusebenzisa itekhnoloji yezobugcisa obuphakamileyo, sigxila ekwenzeni iimveliso ze-TST.
Misela iindawo zokuthengisa kunye namaziko enkonzo yezobugcisa eHong Kong, eShanghai, eGuangdong, eFujian, eChongqing, eBeijing naseChangsha. Kungcono ukubonelela abathengi ngezisombululo ezibanzi zaselabhoratri, kubandakanya uyilo lwelebhu, umhombiso, ukukhethwa kwezixhobo, ukufakwa, uqeqesho, ulondolozo, ulinganiso, uvavanyo lokuthelekisa, iinkqubo zolawulo, ukuqinisekiswa kunye nezinye iinkonzo zobugcisa.
Xa izixhobo zingasebenzi kakuhle, iqela lethu lezobuchwephesha liza kuphakamisa isisombululo, kwaye likhawuleze kwindawo yesantya ngesantya esiphezulu ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwesixhobo. Ngokusekwe kwiqela emva kwentengiso kunye nenkqubo egqibeleleyo yokufayilisha kunye nolawulo lolawulo lolondolozo, izixhobo ze-TST zibonelela abasebenzisi
ngenkonzo yexesha elifanelekileyo, yokucinga kunye nokugqibelela emva kwentengiso phantsi komgaqo ongenzi nzuzo.
Ngaphantsi Ngaphezu koko, kungakhathaliseki ukuba kulawula ihlabathi, okanye alawule shishini, kuba ' s inyaniso efanayo
Zonke zinokushwankathelwa kwiseti ukuze ihambelane nolawulo lwecebo lophawu lweshishini lase-China
ifilosofi evela kumthetho wendalo
Siya kuphumelela ngempumelelo kube kanye ngokuphakathi ngokulinganiselweyo kwendalo yophawu lwentshona kolawulo lobuchule.
Inkxaso yemigangatho emininzi, iimveliso zenkampani zihlangabezana nemigangatho efanayo yamazwe (ISO,
I-AATCC, ASTM, DIN, EN, GB, BS, JIS, ANSI, UL, TAPPI, IEC, VDE). Ukusuka kwindawo yomthengi ye
ukujonga, singakwazi ukuhambelana nesixhobo ngokweemfuno zabathengi, ukusuka kumalungu amancinci ukuya kumbala omkhulu
imbonakalo kunye nomgangatho, onokuthi ubelungiselelwe abathengi.
Kwisiseko sesiqulatho esiphakamileyo sobugcisa, inkampani i-digestsand ifumana itekhnoloji yemveliso ephezulu yamazwe aphesheya, ngesibindi yenza izinto ezintsha, iinguqu kunye nokuzabalazela ukuyila, kwaye isebenzise eyona migama yelizwe jikelele yokusika kwimveliso yokwenyani ukuvelisa iimveliso ezintsha ezineempawu zaseTshayina. I-TST ithembisa ukuba isixhobo sichanekile, sinokuthenjwa kwaye sikhuselekile. Siphuhlisa kwaye senze isixhobo ngasinye sovavanyo ngesimo esiqatha semfundo, kwaye sizama ukwenza okusemandleni ethu.
Umgangatho awusosiphumo, yinkqubo yokulandela rhoqo
I-TST ineenkqubo ezingqongqo zolawulo lomgangatho '
Ukucaciswa ngokubanzi kwemveliso yokusebenza egqityiweyo yokuhlola
Sebenzisa inkqubo yobuchwephesha obuphambili baseJamani, ibhendi nganye yeemveliso, ezothusayo, hlala uphucuka
Thela kwiipesenti ezilikhulu zomzamo
ngenxa yesimo sakho esiqinileyo, qinisekisa umgangatho wokuqala wenqanaba lemveliso ogqityiweyo
Umgangatho ogqwesileyo ufuna izixhobo zodidi lokuqala njengesiqinisekiso, ukuziswa kweTST kubuchwepheshe baseJamani,
Uphando kunye nophuhliso
Ngombono welizwe jikelele osekwe e-China, jonga kwihlabathi liphela,
Iinzame zokuphucula umgangatho wabasebenzi, ukomeleza ukusebenza kwenkqubo,
Ukuze uqiniseke ngomgangatho wemveliso